नेपाल र आयरल्यान्डबिच आज हुने खेल कहाँ ? कति बजे ? कसरी हेर्ने लाईभ ? सम्पुर्ण जानकारी ( शक्दो शेयर गरौ ) – Nepal Trending
नेपाल र आयरल्यान्डबिच आज हुने खेल कहाँ ? कति बजे ? कसरी हेर्ने लाईभ ? सम्पुर्ण जानकारी ( शक्दो शेयर गरौ )
Last updated Oct 9, 2019
काठमाडौं, असोज २२ । ओमानमा जारी पाँच राष्ट्र सम्मिलित ट्वेन्टी–२० क्रिकेट शृंखलाअन्तर्गत् नेपालले आज आयरल्यान्डको सामना गर्दैछ । खेल ओमानको अल अमेरट क्रिकेट मैदानमा हुनेछ । नेपाली समयानुसार बुधबार बिहान सवा ११ बजे खेल सुरु हुनेछ ।
नेपालसामु ऐतिहासिक जित हासिल गर्ने अवसर छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको राष्ट्रिय टोलीले अहिलेसम्म टेस्ट राष्ट्रलाई हराउन सकेको छैन । आयरल्यान्ड टेस्ट मान्यताप्राप्त राष्ट्र हो । प्रतियोगितामा नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा हङकङलाई ४ विकेटले हराएको थियो । दोस्रो खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई पनि समान ४ विकेटले नै पराजित गरेको थियो ।
आज तेस्रो खेल खेल्न लागेको नेपाल ‘नेट रनरेट’का आधारमा अंकतालिकामा तेस्रो स्थानमा छ । दुई खेलबाट नेपालको ४ अंक छ । आयरल्यान्ड दोस्रो स्थानमा छ । दुई जित र एक हार व्यहोरेको उसले तीन खेलबाट ४ अंक नै जोडेको छ । आयोजक ओमान शीर्ष स्थानमा छ । दुई खेलबाट ओमानको ४ अंक नै छ ।
नेपालले यसअघि सन् २०१५ मा आइसीसी टी–२० विश्वकप छनोटमा आरल्यान्डसित प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । त्यतिबेला नेपाल ८ विकेटले पराजित भएको थियो । आयोजक ओमान, नेपालसहित आयरल्यान्ड, हङकङ र नेदरल्यान्ड्सबीच शृंखला भइरहेको हो । नेपालले अन्तिम खेल बिहीबार ओमानसित खेल्ने तालिका छ ।
खेल समय , लाइभ कहाँ हेर्ने , मैदान :
ओमानमा आयोजना हुने पाँच राष्ट्रबीचको टी–ट्वान्टी क्रिकेट सिरिज प्रत्यक्ष प्रशारण हुने भएको छ । आयोजक ओमान क्रिकेटले नेपाल, आयोजक ओमान, टेष्ट राष्ट्र आयरल्याण्ड, हङकङ र नेदरल्याण्डबीच हुने सिरिज प्रत्यक्ष प्रशारण हुने जनाएको छ । ओमानले आफ्नो वेबसाइटबाट प्रत्यक्ष प्रशारण हुने जनाएको छ । खेलको अपडेट मेरो क्रिकेट डट कमको फेसबुक पेज र वेबसाइटमा पनि हुनेछ।
ओमानमा हुने प्रतियोगितामा नेपालको खेल तालिका
असोज २२ गते नेपाल भर्सेस आयरल्यान्ड
असोज २३ गते नेपाल भर्सेस ओमान
नेपाल टिम : पारस खड्का (कप्तान), दीपेन्द्रसिंह ऐरी (उपकप्तान), विनोद भण्डारी, सन्दीप लामिछाने, पवन सर्राफ, सन्दीप जोरा, कुशल मल्ल, रोहितकुमार पौडेल, सोमपाल कामी, करण केसी, आरिफ शेख, अविनाष बोहरा, ललितनारायण राजवंशी, सुशान भारी र इशान पाण्डे ।
अष्ट्रेलियाबिरुद्ध टि-२० शिरिज खेल्ने श्रीलंकन टिमको घोषणा , सबैभन्दा बुढो खेलाडी बने…
बिनोद भण्डारी बन्न सक्छन् नयाँ नेपाली क्रिकेट कप्तान ! यस्तो भित्री कारण
तिन स्टार खेलाडी प्रतिबन्धमा परेपनि युएईले आयरल्याण्डलाई हरायो , मुस्तफाको अलराउण्ड…
रोहित चम्के कोहली फ्लप ! पहिलो दिन भारतको शानदार प्रदर्शन
किङ कोहली फ्लप हुदाँ रोहितले बनाए एउटै शिरिजमा सर्वाधिक छक्का हान्ने रेकर्ड
नयाँ कप्तान बन्ने रेसबाट सन्दिप आउट , यसकारण कप्तान बन्न सक्दैनन् सन्दिप
अष्ट्रेलियाबिरुद्ध टि-२० शिरिज खेल्ने श्रीलंकन टिमको घोषणा , सबैभन्दा बुढो...
पाथीभरा माताले सबैको रक्षा गरुन ! कार्तिक ३ गते आइतबार...
बिनोद भण्डारी बन्न सक्छन् नयाँ नेपाली क्रिकेट कप्तान ! यस्तो...
भ्वाईसबाट बाहिरिएकी झुप्री मिडियामा ! आउट हुनुको भित्री कारण खोलिन्...
तिन स्टार खेलाडी प्रतिबन्धमा परेपनि युएईले आयरल्याण्डलाई हरायो , मुस्तफाको...
किङ कोहली फ्लप हुदाँ रोहितले बनाए एउटै शिरिजमा सर्वाधिक छक्का...
सकिएको छैन आस ! अझै टि-२० बिश्वकपमा पुग्न सक्छ नेपाल...
© 2019 - Nepal Trending. All Rights Reserved.